China Cas61-54-1 tryptamine Fekitori yakananga muchitoro fekitori nevatengesi Minshang
Tryptamine ndeye monoamine alkaloid, yakafanana nemamwe maronda amines, inofungidzirwa kuti inoita basa seyeuromodulator kana neurotransmitter.
378.8 ± 0.0 ° C pa760 mmHg
113-116 ° C (kuvhenekerwa.)
0.0 ± 0.8 mmHg pa25 ° C
Tryptaminemonoamine alkaloid iyo inogona kugadzirwa ne decarboxylation yeamino acid tryptophan. Sezvineiwo, tryptamine inogona kuwanikwa mune fungi, zvirimwa, Amphibia, mhuka, uye utachiona.
Tryptamine ine indole ringi dhizaini uye yakapetwa kaviri ringi iyo inoumbwa nebenzini mhete uye pyrrole mhete, yakabatana neboka reamino ne2-kabhoni yecheni ketani. Iyo indole mhete ndiyo yakakosha nucleus yezvinhu zvakawanda zvakaomarara zvigadzirwa zvine zvakakosha mukuwanikwa kwezvinodhaka pamwe nezvimwe zvinogadzirwa uye zvisina-synthetic zvinodhaka zvinovakirwa pane tryptamine marangwanda.
Chimiro chemakemikari chakasarudzika ndeyekufungidzira kune iyo neurotransmitter serotonin pamwe nemishonga inozivikanwa uye hallucinogens. Kukosha kwaTryptamine se psychedelic zvinodhaka, neuromodulator, uye neurotransmitter inonyatsonzwisiswa nekuda kwekuvapo kwayo muhuropi hwemammalia mune zvidiki.
Analogs e tryptamine ayo anowanzo kugadzirwa nekushandurwa kwawo kwekuita anoita chinzvimbo chakakosha muvanhu nekuda kwekuunzwa kweanoshanda ayo ari biologically anoshanda mukati maro musukamu izvo zvinogona kukonzeresa shanduko muhunhu hwepanyama nehuviri hwehuropi hwemunhu.
Kugadziriswa pamhete ye indole pa nitrogen uye C-2 yecheni yayo yemakona inogadzira akawanda neuroactive makemikari kubva kune anti-migraine zvinodhaka kune zvine chepfu zvinhu, senge rizatriptan, sumatriptan, uye zolmitriptan. Chishoma che tryptamine chinodiwa nekuda kwekufa kwayo uye kudhakwa kwezvikonzero zvakati wandei.
Tryptamine ndeye monoamine alkaloid inowanikwa mune zvinomera. Tryptamine inowanzo shandiswa mukugadzirira kwema biologically anoshanda macomputer senge maurotransmitter uye psychedelics.
Zvirimwa zvine Tryptamine
Mune zvirimwa, tryptamine mune zvidiki zvidiki inoshanda sechikamu chinovimbisa kune iyo chirimwa kemikari indole-3-acetic acid mune imwe biosynthetic nzira. N, N-dimethyltryptamine (DMT) chibereko chekuedza chinonzi tryptamine icho chinoshanda pakuita hallucinogenic mhedzisiro yekubika inozivikanwa se "muzambiringa wemweya." Indigenous madzinza eAmazon vagara vachishandisa chinwiwa ichi pakurapa zvinoshanda pakurapa kwakaringana kwemamwe maronda epanyama uye kushungurudzwa kwekushungurudzwa. Mashiripiti howa ndiwo akajairika fungi ane tryptamine zvigadzirwa.
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), inova chibereko chechisikigo che tryptamine chinhu chakakosha kuratidza mahormoni anobatsira mukugadzirisa uye kudzora kwemaitiro mazhinji mukati meiyo central system, semuenzaniso, kugona, kurara, kupisa tembiricha, ndangariro , uye hunhu. Uropi hwemammalia hune zvidiki zvidiki zve tryptamine, izvo zvinowanzoita se modulator kana neurotransmitter kubuditsa serotonin vamiririri. Iyo zvakare inosimudzira yeserotonergic chiitiko. Mineti imwe chete inodikanwa kuti tryptamine ibudise psychotropic phenomena painoshandiswa mukuvaraidza. Yakave ichibatanidzwa nekufa uye kudhakwa kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira yakaderera chepfu kuwanda.
Yakachena kuOrange Crystalline Powder
ChEBI: Aminoalkylindole ine indole ine 2-aminoethyl boka panzvimbo ye3-chinzvimbo.
tryptamine: Aaloalalkaloid inoitika, C10H12N2, iine indolering system ine -CH2 – CH2-NH2side cheni mune iyo 3-chinzvimbo cheititrogen-ine mhete. Mhedzisiro ye tryptamines ine hallucinogeniceffects. Muenzaniso mu psilocybin.
Crystallize tryptamine kubva * benzene, Et2O (m 114o) kana pet ether (m 118o). Iine UV: 222n 276, 282 uye 291nm (EtOH) uye max 226, 275, 281 uye 290nm (HCl). [Beilstein 22 II 346, 22 III / IV 4319, 22/10 V 45.]
Tryptamine Kugadzirira Zvigadzirwa Uye Mbishi zvigadzirwa
Kuwandisa 1.2 ± 0.1 g / cm3
Boiling Point 378.8 ± 0.0 ° C pa760 mmHg
Kunyorera Nzvimbo 113-116 ° C (kuvhenekerwa.)
Molecular Kurema 160.216
Flash Point 187.7 ± 8.1 ° C
Misa chaiyo 160.100052
Mhepo Yekumanikidza 0.0 ± 0.8 mmHg pa25 ° C
Index yeRefraction 1.669
Kugadzikana Kwemvura kuregeredza
Q1: Ndingawana muyenzaniso here?
A: Mahara sampuli anowanikwa, nepo mutengo wekutakura uchifanira kubhadharwa nemutengi.
A: Yedu MOQ ndeye 10g, 100g uye 1kg yeako yekuyera mhando yezvinhu zvedu pane mamiriro ekuti sampu yekuchaja ndeye 100% yakabhadharwa.
Q3: Pane chero chakaderedzwa here?
A: Ehe, pakuwanda kukuru, isu tinogara tichiisa mutengo unokwikwidza uyo unokwezva kwauri.
Q4: Ndeapi mazwi ekubhadhara aunogamuchira?
A: Tinoda kugamuchira T / T, L / C, Paypal, kana Western Union.
Q5: Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane izvo zvakanaka?
A: Zvichienderana nenzvimbo yauri, Kune diki odha, ndapota tarisira mazuva 5-7 neDHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS.
Zvekuraira kwakawanda, ndapota tendera mazuva mashanu kusvika kumakumi masere neMhepo, mazuva makumi maviri nemakumi matatu nemashanu neGungwa
Q6: Unoita sei kunyunyuta kwemhando yepamusoro?
A: Chekutanga pane zvese, yedu quyality kudzora inoiswa pane yekutanga. Kana paine chero nyaya dzine chekuita nehunhu hwakakonzerwa nesu, tinokutumira zvinhu sekutsiva kana zvemahara kana kudzorera kurasikirwa kwako.
Pashure: Cas 62-44-2 Phenacetin China fekitori
Zvadaro: Yakanaka mhando China Yakanakisa Hunhu 2-Iodo-1-P-Tolylpropan-1-Imwe CAS 236117-38-7
Factory Kutengesa China High Quality Xylazine zvaiti ...
Kupa 3-Bromopropyne CAS 106 96 7 Propargyl Br ...
China inogadzira sodium saccharin mutengo wakanakisa ...
High yepamusoro China Low Price Big crystals / S ...
4-Butylresorcinol CAS 18979-61-8 Kukurumidza Kuendesa